MARA USS Nimitz & USS Eisenhower V2 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 200 865
Emelitere na 29 / 08 / 2017: Ugbu a 100% dakọtara na Prepar3D v1, v2, v3 na v4 + FSX, FSX-Akpali edemede. Ihe nrụnye akpaka na-emezi emezi, ụdị ọhụrụ AICarriers 2 (.NET) dakọtara na simulators ndị a kpọtụrụ aha n'elu.
Emelitere na 6 / 17 / 2014: Mmelite akpaka akpaka, ndakọrịta na Prepar3D v1 na v2 +
Lee ụgbọ agha ụgbọ mmiri USS Nimitz & USS Eisenhower sitere n'ụgbọ mmiri US. Nke a bụ add-on akpọrọ AI (Artificial Intelligence) nke kọmputa na-achịkwa.
Ihe a di elu add-on ga-enyere gị aka ịbanye n’elu ụgbọ elu abụọ zuru oke na 3D ime / mpụga nwere ọtụtụ nhazi. Ọzọkwa enwere heliport na catapult maka takeoffs.
Ịkwụsị ya VERSION:
-New "Underway Replenishment" configurations maka Nimitz na Eisenhower. Ezigbo maka VERTREP arụmọrụ na helos.
-New Nlereanya nke nsoro oiler USNS Patuxent T-AO 201. Atụmatụ landable helipad na abalị àmụmà. Ọ na-arụ ọrụ onwe ha dị ka ihe Ai ụgbọ mmiri nke pụrụ ụgbọ mmiri n'onwe ya (ihe ọzọ nhazi maka AIcarriers na-nyere):
-Added Uzuoku mmetụta na niile agbapụ àkụ mee (anya ka mma na ụgbọ mmiri ahụ na ije)
-Added Ụda maka catapult igba egbe na ugboelu gbawara deflectors
-Fixed Na nke kpatara player ya ụgbọelu na-ada ala na mmiri na-abanye hanga oche si #3 igwe mbuli.
-Fixed Abalị àmụmà okwu maka ụfọdụ ụgbọ elu na "mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri gaa na" configurations
-Corrected Ụfọdụ adabaghị na AFT Rada ụlọ elu na nke agwaetiti ahụ.
-Additional Catapult ndi oru ugbo maka nwamba #3 na #4.
-New Udidi maka catapult shuttles.
New akpaka installer, fixes nsogbu na echichi nke AICarriers 2. Ugbu a dakọtara na niile nsụgharị nke Windows.
dakọtara FSX SP2, FSX Mee ngwangwa, FSX Ntan Steam na Prepar3D v1 v2, v3, v4
Will ga-enwe ike ịbanye na ụgbọ elu abụọ a, ana m adụ gị ọdụ ka ị jiri T-45 Goshawk na F-14 Tomcat maka FSX nke Dino Cattaneo dere. lee https://indiafoxtecho.blogspot.com/
Gụnyere na nhọrọ: AIcarriers2 bụ obere mmemme na-enye gị ebe gị Ai ụgbọ mmiri ka a predefined anya n'ihu gị otú i nwere ike adaa na ya.
The USS Nimitz (CVN-68) ugbo elu ụgbọelu bụ a vasatail American nuclear-kwadoro. Ọ bụ otu n'ime 11 ibu ugbo elu-ebu n'Òtù Ndị Agha Mmiri na bụ ugbu a otu n'ime ndị kasị dị ike warships na ụwa. The ụgbọ mmiri aha ya bụ Nimitz, na nsọpụrụ nke Admiral Chester Nimitz, onye nyere iwu ka Pacific Fleet n'oge Agha Ụwa nke Abụọ. The ụgbọ mmiri motto bụ "Ịrụkọ Ọrụ Ọnụ, a Tradition". isi iyi Wikipedia
The USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), utu aha Ike, bụ a vasatail ugbo elu ụgbọelu US nuklia-kwadoro, nke Nimitz klas. Ọ bụ nke abụọ ugbo elu ụgbọelu Nimitz subclass, na bụ otu n'ime 11 ibu ugbo elu-ebu n'Òtù Ndị Agha Mmiri. E nyere ya iwu iji dochie USS Franklin D. Roosevelt, onye bụbu onye ugbo elu ụgbọelu si Agha Ụwa nke Abụọ. Na mbụ, ụgbọ mmiri ahụ aha ya bụ na nsọpụrụ nke Eisenhower 34th President nke United States, Dwight David Eisenhower. Otú ọ dị, aha-ya nyere ndị zuru aha Dwight D. Eisenhower May 25, 1970. The ụgbọ mmiri motto bụ "-amasị m Ike." Ebe ọ bụ na-abịa n'ime ọrụ, Ike nwere 13 dị iche iche onyeisi. isi iyi Wikipedia
Onye edemede: Javier Fernandez, Sylvain Parouty, mgbanwe nke Rikoooo
Njikwa Towerlọ Elu FSX & P3D
Ihe omuma nke HMS Bounty FSX & P3D 2.0
Nwa Zeppelin NT v1.0 FSX & P3D